Zviratidzo zvekukwezvana pakati pevashandi pamwe navo | Stylish Men
Zviratidzo zvekukwezvana pakati pevashandi pamwe chete
Alicia tomero | 29/05/2022 10:34 | Vakaroorana uye Bonde
Vashandi pamwe chete vanogona kupa zviratidzo zvenhema kufungidzira kana murume iyeye waunoda kunzwa kukwezvwa kwauri. Kana murume achifarira mukadzi inopa zviratidzo zvakajeka, asi zviratidzo zvekukwezva pakati pevashandi pamwe chete zvinogona kuwandisa zvichipiwa kuti kurapwa kwemazuva ose kunogona kukanganisa.
Paunoshanda mukambani ine vashandi vakawanda inogona kuve iyo nzvimbo chaiyo yekuona munhu iyeye waunoda uye svika pakumuziva zviri nani. Nzvimbo yacho yakanakira, zvakanyanya kana kudarika kupfuura paunobuda kunosangana nevanhu munzvimbo dzakaita semabhawa kana makirabhu ehusiku. Asi ngatitangei kuziva zvakadzama kana vanhu vaviri ava vachifarirana.
1 Kutaridzika kunogara kuripo
2 Pavanoonana vanogara vachinyemwerera
3 kurumbidza hakuna kushaikwa
4 Ngwarira kuuya nekofi
5 Vachadya kudya kwemasikati pamwe chete
6 Kurovera kunonyengerera kunoonekwa pakati pavo
7 Vanopindirana pamusuwo nekubuda kwebasa
8 maitiro asina kujairika
Kutaridzika kunogara kuripo
Hapana humbowo huri nani uye cherechedza izvozvo kutarisa kunoenderera uye kunodzokororwa. Uye kwete izvozvo chete, asi vanoseka, kuseka uye kubata mumwe nemumwe. Chitarisiko chacho chinofanira kuva chinofadza, kwete chitarisiko chenguva dzose, asi chinocherechedzwa kuti mumwe munhu wacho anoita sei ari kuona asingazvizivi.
Uyewo teerera kusimba kwechitarisiko ichocho uye kana mukuwedzera vanogona kubatwa nekuregererwa uye vanogona kutotenderedza misoro yavo nekuti mumwe abata mumwe achimutarisa. Iyi chirevo inogona kuverengerwa kana iwe uchida kuongorora kana pane mumwe munhu kubasa anokuda.
Kana zviitiko izvi zvikaitika, unofanira kumupa chirevo ichi chokuti anokuda. Kana ari munhu anoramba akatarisa, zvingadaro kutsvaga nguva yekutyisidzirwa, sezvo ari munhu ane chivimbo uye akatsunga.
Pavanoonana vanogara vachinyemwerera
Haisi kungotarisisa kwakavanzika chete, asi ivo vanozokwanisa kuona kuti chiso chimwe chinopenya sei pachinoona chimwe, uye kunyange kunyemwerera. Kana mudiwa achikuda, zviri pachena hairegi kunyemwerera pese pandinosangana newe.
kurumbidza hakuna kushaikwa
Kune vanhu vakawanda vanoda kuva vakanaka kune vamwe vanhu, uye kunyange kune vavanoshanda navo. Hapana chinhu chiri nani pane kuenda kubasa wakadzikama uye uchinzwa mukuwirirana. Asi zvinogona kuitika kuti mumwe wevanofambidzana nguva dzose ratidza zvakawanda zvekubata kumeso uye kurumbidza kune mumwe munhu.
Zviratidziro zverudo zvinogona kuvapo, zviri pachena, asi kana zvatamisa chimwe chinhu chinopfuura tsika yakareruka zvino chinofanira kutorwa. kunge munhu anonyumwa. Muzviitiko zvakawanda, kubata kumeso kungave kusiri madikanwa, asi kana zvichiratidza kuti haugone kunyarara ndokuzvitaura, chiratidzo chakajeka chekutikunzwa kukwezva kukuru.
Ngwarira kuuya nekofi
Inogona kuva kofi, chokoreti bar, keke duku, snack, asi chokwadi ndechokuti iyo tsanangudzo shoma anongori naro nemunhu mumwe chete. Hapana waunoshanda naye anogamuchira iyo diki yekuwedzera mupiro uye ndipo paunofanira kunyumwira.
Vachadya kudya kwemasikati pamwe chete
Pakati pevaanoshanda navo zvinogona kucherechedzwa kuti nguva nenguva vanoenda kunodya pamwe chete, asi riini vanobuda nguva dzose chiratidzo chakajeka chekuti pane chiri kuitika. Kunyangwe ukasasvika panguva yekudya kwemasikati nekuti mumwe wenyu aive nemusangano, munogona kuona kuti mumwe munhu anoteerera sei. Muunzire kudya kwemasikati iyo yakanga isati yatorwa.
Kurovera kunonyengerera kunoonekwa pakati pavo
Kutamba ndiyo kiyi, sezvo vakamirira kunyemwerera chero mamiriro ezvinhu. Mune ipi neipi yenguva idzi hapana mazwi chete asi kushamwaridzana kwakareruka, dzimwe nguva kunyange rudo uye vasina mhosva. Inogona kutongwa chete nemaitiro aunoita kune vamwe vaunoshanda navo, sezvo iyi ndiyo nzira ichakusarudzira iwe.
Vanopindirana pamusuwo nekubuda kwebasa
Zvakangoitikawo hazvo izvozvo Vanhu vaviri vanogara vachipinda kana kubva kubasa panguva imwe chete. Izvo zvinoitikawo panguva yekuzorora uye kwete kamwe chete kana kaviri pavhiki, asi zvinoonekwa kuti vanozviita zuva nezuva.
maitiro asina kujairika
Kungotarisa kuti mumwe nemumwe wavo anozvibata sei zvirevo zvinoratidza kuti vanodanana. Iwe unogona kuona kuti vamwe vavo vakakwanisa sei kutanga kuzvigadzirisa zvakanyanya, kutozora mafuta ekuzora.
Pavanenge vachishanda unogona kuona kuti muviri wevamwe vavo sei inotendeukira kune imwe nguva dzose. Nyatsoona kana zvichiitika the mirror effect pakati pezviviri. Izvi zvinoreva kuti kana mumwe wevaviri achiita chimwe chinhu, somuenzaniso, kubata bvudzi ravo, mumwe munhu asingazive anotevedzera izvo mumwe munhu achangobva kuita.
Mukupedzisa, kuziva kana vanhu vaviri vachifarirana pabasa kuri pachena kubva munhevedzano yezvataongorora. Zvakawanda zvacho zvinofanirwa kuenderana kuti zvionekwe. Asi chokwadi chekuti vanodanana uye kuonana zuva nezuva kunogona kukonzera kunetsana uye kusawirirana, sezvo kudanana kunogadzirwa kubasa kuchigona kunetsa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kukodzera » Vakaroorana uye Bonde » Zviratidzo zvekukwezvana pakati pevashandi pamwe chete
Maitiro ezhizha rino 2022